Imtixaan Mideysan – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta daah furay Imtixaanaadka mideysan, ee Shahaadiga ah Dugsiga Sare oo maanta ay u fariisteen 27,600 oo arday.
Schoolka 15-ka May oo uu ka dhacayey imtixaanaadkaasi oo si weyn loo adkeeyey amnigiisa ayaa waxaa gaaray Ra’iisul wasaaraha dalka oo ay wehliyaan Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Wasiirka Wxbarashada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ka hadlay daah furka Imtixaanaadkaasi ayaa sheegay in waxbarashadu ay tahay qeybta ugu muhiimsan ee horumarka daka, in wax la bartana ay astaan u tahay dib u dhiska dalka.
“Waxaan u mahad celinayaa Aabayaashii iyo Hooyooyinkii ka soo shaqeeyey in caruurtooda ay soo gaarsiiyaan halkaan, Innagana ka dowlad ahaan waxaan ku dadaali doonaa insha allh si arday walbo uu fursad u heli lahaa”ayuu yiri Mudane Xasan Cali Kheyre.
Ra’iisul wasaaraha dalka ayaa sidoo kale u mahad celiyey cid waliba oo howshaan kasoo shaqeysay, gaar ahaana wasaaradda waxbarashada dalka.
Magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaar ayaa waxaa maanta ka bilowday Imtixaanka mideysan ee shahaadiga, kaasoo ah markii saddexaad ee Wasaaradda Waxbarashada ay qabato, tan iyo burburkii dowladdii Dhexe.